Ọrụ - Guangxi G&M Enterprise Management Co., Ltd.
Nke mbụ, anyị nwere afọ 30 nke mmepụta ahụmahụ na diamond ịcha pupụtara, otú anyị nwere ike hụ na elu-edu nke anyị products.Then anyị nwere ike inye OEM ma ọ bụ ODM ọrụ, dị ka gị kpọmkwem chọrọ ezitekwara na ngwaahịa gị. ị nwere nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eji ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo, anyị ga-aza ha maka gị n'ịntanetị.
Ndị injinia anyị ga-achọ ịgwa gị gbasara nsogbu ọrụaka, a nabatara gị iji bulie ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, anyị ga-eso gị kerịta enweghị nchekwa. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ injinia anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla.
Mgbe ọ bụla anyị zutere ndị ahịa anyị, anyị na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile. Site na mmụọ ọrụ na ọrụ dị oke mkpa, anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka idozi nsogbu, ka ha wee nwee ike izere nsogbu ma chekwaa mbọ na usoro ịzụta. Site na nkwupụta mbụ ruo na njedebe ikpeazụ nke omenala, anyị na-etinye njikọ dị mkpa na njikọ ọ bụla iji hụ na azụmahịa ahụ na-aga nke ọma.Besides, ndị otu ọrụ ahịa anyị ga - enyere ndị ahịa anyị aka ịchekwa oge ha. .